Galaxy S9 ga -amata ihu na iris n'otu oge | Androidsis
N'ihe na-erughị otu ọnwa, a ga-egosi Galaxy S9 na eze. Obi abụọ adịghị ya na ekwentị Samsung bụ otu n'ime atụmanya kachasị na ahịa na ọkara ọkara nke afọ. Firmlọ ọrụ ahụ ejisie ike wepụta ọtụtụ atụmanya na mwepụta a. Luckily, nke nta nke nta anyị na-amụta nkọwa banyere ngwaọrụ. Ugbu a, otu banyere iris nke ngwaọrụ na teknụzụ ihu ihu.
niile anyị maara usoro eji amata ihu mmadụ na iris nyocha. Ha abụọ meghere ekwentị ahụ n'enweghị nsogbu. Ọ bụ ezie na usoro ndị a na-arụ ọrụ iche. Mana ọ dị ka na Galaxy S9 ha ga-arụ ọrụ ọnụ.
O doro anya Samsung mepụtara usoro ohuru maka ngwaọrụ ahụ. Usoro ihe ohuru a biara n'okpuru aha Nyochaa ọgụgụ isi. Ọ bụ usoro nke ga - ejikọ ihu ihu na iris scanning na otu. Yabụ mgbe onye ọrụ chọrọ ị kpọghee Galaxy S9, ha ga-emerịrị ma ha abụọ.
Ngwakọta nke sistemụ abụọ a dị ka ụzọ iji bulie nchekwa na ngwaọrụ. Ebe ọ bụ na ụzọ abụọ ahụ n'onwe ha na-ahụta dị mma. Ebe ọ bụ naanị onye ọrụ ga-enwe ike ịmeghe ekwentị na ikpe ahụ. Mana, site na nchikota a, ọ na-esiri onye ọzọ ike ịnweta ngwaọrụ ahụ.
Iche iche, usoro nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Ma ha yiri ka ha siri ike karịa ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'ihi ya, ọ nwere ike ịbụ a ezigbo ọrụ maka Galaxy S9. Ọzọkwa, na vidiyo dị n'elu ị nwere ike ịhụ otu sistemụ a si arụ ọrụ.
Obere obere anyị na-amụtakwu nkọwa banyere Galaxy S9 a. Ekwentị bụ otu n’ime ihe ndị kachasị atụ anya na ọ ga-abụrịrị otu n’ime nnukwu ebe nkiri nke MWC 2018. Ọ dabara nke ọma, nchere ahụ dị mkpụmkpụ. Yabụ n'ime izu anọ anyị ga-amata nkọwa niile gbasara ekwentị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Galaxy S9 ga-enwe ike ịmata ihu gị na iris n'otu oge
Budata akwụkwọ ahụaja ọhụrụ Galaxy S9 na S9 +